सुन्दर Hairstyles प्रशस्त। तर, बाल को दैनिक हेरविचार एउटा व्यापार वा रोमान्टिक छवि र सिर्जना, बिछाउने मात्र होइन प्रभावकारी, तर गठन गर्न पनि सजिलो पर्छ। यो गर्न, पूर्ण केश पुच्छर गर्न अनुकूल। मिनेट को बस एक जोडी सम्भव बनाउन, र परिणाम सबै आशा बढी छ।
एक पुच्छर संग केश। जग
अन्तिम परिणाम सभ्य देख्यो, तपाईंले केहि सरल नियमहरू पालन गर्न आवश्यक छ। बाल सफा हुनुपर्छ! अन्यथा, चिल्लो लागेको जरा स्थापना को छाप बिगार्छ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं कपाल चुल्ठो सुरु गर्नु अघि, राम्ररी comb गर्नुपर्छ। तपाईं पनि हासिल र किसिमहरु चिकना गर्न सक्छन् मात्र तरिका हो। केश माथि उठाएर अंश फैलएको टाउको मा गठन भएको छैन भनेर निश्चित गर्नुहोस्। तिनीहरूले एकदम केश बिगार्छ छन्। को पुच्छर रबर ब्याण्ड कडा पछि, बिस्तारै यो पातलो Strand छील र पुच्छर को आधार वरिपरि यसलाई धेरै पटक र्याप। अदृश्य सुरक्षित, फिक्सिंग को लागि एक माध्यम लागू हुन्छ। केश यसको पुच्छर संग तयार छ। यसको सिर्जना दुई वा तीन मिनेट लाग्यो।
तल एक पुच्छर संग केश
यो नियुक्ति हामी माझ गर्नुपर्छ, रबड र सजावटी तत्त्व को गठन को लागि। ध्यान दिएर, बाल कंघी घाँटी नजिकै ponytail मा बाल सङ्कलन। एक रबर ब्याण्ड समाधान। र अब एक सानो खींच यो तल भनेर पुच्छर मा लोचदार ब्यान्ड तल चार वा पाँच सेन्टिमिटर गर्न उतर। ध्यान दिएर, बराबर भागहरु र पुच्छर हटाउने मा लोचदार र टाउको बीच बाल विभाजित परिणामस्वरूप प्वाल मार्फत यसलाई पारित। त्यसैले, तपाईं बिछाउने को पूर्णतया नयाँ र सजिलो विकल्प गठन गरेको छ। केश लाह सुरक्षित र राम्रो सजावटी बाल क्लिप वा ठूलो उज्ज्वल फूल थप्नुहोस्। यो सामान्य hairpin गर्न पिगलो प्रयोग चिपके गर्न सकिन्छ। त्यसपछि बस पुच्छर को केन्द्र मा यसलाई ठीक। हुनेछ धेरै देखावटी र असामान्य केश, समय को एक न्यूनतम लाग्छ। वा तपाईंले केही छोटो स्टड यस्तो सजावटी तत्व, तर सानो फूल वा मोती संग गर्न सक्नुहुन्छ। तिनीहरूले रोमान्टिक वा शास्त्रीय सिर्जना गर्न मद्दत साँझ स्टाइल।
एक पुच्छर संग केश। विकल्पहरू
यसको स्पष्ट सादगी बावजुद पुच्छर आधारमा धेरै राम्रो साँझ स्टाइल सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ। केश को छनोट outfit, मुड र तपाईं जान योजना जो गतिविधिहरु मा सम्पूर्ण निर्भर गर्दछ। माथिल्लो तलाको को Parietal क्षेत्र को कपाल भारोत्तोलन, र आफ्नो गम फिक्सिंग, र तपाईं चुपके प्रयोग र टाउको संलग्न गठन गर्न बाल, फिक्सिंग को लागि अर्थ गर्न सक्नुहुन्छ। तिनीहरूलाई Parietal क्षेत्र को चरण मा राख्नु र केही टाउको पछाडि तल जाने, तैयार शीर्ष प्राप्त। र टाउको पछाडि एक पुच्छर गठन। भाग किसिमहरु त्यसैगरि मा राखे, र दोस्रो भाग मा या बाल फलाम कर्लिंग र कर्ल सिर्जना स्क्रूड। हामी तिनीहरूलाई मुक्त छोडेर एक प्रक्रिया निर्धारण लागि हो। तपाईं ढुङ्गा रंग वा hairpins थप्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि मामला मा, तपाईं एक धेरै नाटकीय सैलुन, दुई पुच्छर आधारमा बनेको प्राप्त। को सानो घर मा मास्टर तपाईंले केही फरक स्टाइल विकल्पहरू प्रस्ताव हुनेछ, गठन पहिलो चरण सबैभन्दा साधारण पुच्छर हुने को!
"Esvitsin" मतलब: उपभोक्ताहरु को समीक्षा
झूटा कपाल Hairstyles, वा कसरी कपाल को एक मात्रा हासिल गर्न?
के बाल मास्क लागि भिटामिन प्रयोग गर्ने?
लन्डन आँखा - अल्बियन को प्रसिद्ध ल्यान्डमार्क
तातार बिदा। Tatarstan को संस्कृति
स्वादिष्ट खरायो र बस खाना पकाउने
कसरी अनुहार लागि मह प्रयोग गर्ने?
को बैलिस्टिक चक्कु के हो
रेस्टुरेन्ट "Skazka" (Yaroslavl राजमार्ग): वर्णन, मेनु, फोटो